Uhlalele ovalweni uShakes Mashaba | News24
Uhlalele ovalweni uShakes Mashaba
Umdlali wasesiswini weBafana Bafana u-Andile Jali ungomunye babadlali okubanjwe umoya ngabo kulandela izindaba zokuthi babonakala bengekho esimweni ngenxa yokuthinteka, njengoba iqembu lesizwe lizilungiselela ukudlala neCameroon ngoMgqibelo.ISITHOMBE: BackpagePix
UMQEQESHI weBafana Bafana u-Ephraim “Shakes” Mashaba usalokhu ethandaza engaqedi ngenxa yesimo sabadlali akangasiqondi kahle ngaphambi komdlalo wabo neCameroon ngoMgqibelo.
Abanye abadlali abaseqenjini basalokhu behlushwa izinhlungu ezidalwa izidubulo ezindala nabasanda kuzithola bedlalela amaqembu abo.
Noma uMashaba esazwakala noma etshengise ukubathemba bonke abadlali abakhethile futhi waze washaya phansi ngonyawo waze wabovu ebusweni ebavikela, kodwa kusekhona okuncane okumkhathazayo emoyeni.
Okokuqala okumhluphe zisuka nje amadaka ngamalungiselelo, ukufika ngemva kwesikhathi kwabadlali abayidlanzana ekhempini.
Ngalolu daba, ayikho bandla into abengayenza uMashaba ngoba imidlalo ehlukene yemiqhudelwano yeCaf ibithe chithi saka kule mpelasonto edlule.
Phela kuzokhumbuleka ukuthi amaqembu afana noKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns neBidvest Wits bebephumile beye ngaphandle kule midlalo.
Iningi labadlali abasanda kumenyezelwa uMashaba bakwazile ukufika ngesikhathi ekhempini nalapho behlanganele khona eMilpark Hotel, eGoli ngeSonto ntambama emva kwemidlalo yabo yeligi. Kusobala-ke ukuthi lo mqeqeshi akabuthanga quthu ubuthongo emincele ukuthi labadlali abakhethile bafike beyimiqemane, bengalimele.
Cishe sebebonke abadlali abebephume namaqembu abo babalelwa kwisishiyagalolunye.
Okunye okubukeke kumnyusela ushukela umqeqeshi weBafana Bafana indlela imidlalo ehlelwe ngayo yiCaf, noma-ke eyekelana ngayo.
Phela iqembu laseMzansi libukeka lizobe lizalelwe yinja endlini, lapho izobe ibhekene neCameroon ngezinsuku ezithothelene eduze emidlalweni yokuhlungela abazoya kwi-Africa Cup of Nations (Afcon).
Iningi longoti bebhola lase-Africa nosozindaba abaningi baseMzansi bacabanga ukuthi noma basho bangahlonizi ukuthi uMzansi, iBafana Bafana phela, kuzofanele ilwise kwemamba enamanxeba futhi balichobozele leli qembu laseWest Africa. Ngaphandle nje kokunanaza nokufihla iqiniso, lo mdlalo awukho lula neze ngoba phela kuzokhumbuleka ukuthi iCameroon isize yawina i-Afcon izikhathi ezine. Lo mdlalo uzoqala ngo-4: 30 pm ngokwewashi lakuleli.
Lo mdlalo phakathi koMzansi nama-Indomitable Lions uzobe useStade Omnisport de Limbe eLimbe ekuhambeni khona eCameroon.
Kanti umlenze wesibili uzobe useMdubane, eThekwini, eMoses Mabhida Stadium ngoLwesibili oluzayo (March 29) ngehora lesikhombisa ebusuku.
Okunye okwenza kube lukhuni satsh emkhankasweni weBafana Bafana wukuthi abakwazanga ukuthola abaphuzu agcwele emidlalweni yabo emibili yokuqala. Phela uMzansi wadlala ngokulingana neGambia (0-0) wase ushaywa ngo-3-1 yiMauritania ngonyaka odlule. Izibalo zithi okungenani uMzansi kuzofanele ulwele ukuthola amaphuzu amane ukuze ube semathubeni okuya kwi-Afcon ngonyaka ozayo. Kuyacaca-ke ukuthi ukuhlulwa ngama-Indomitable Lions kuyosho ukuncipha kwamathuba okuya kwi-Afcon ka-2017 eGabon.
Ngokusho kokusho kukaMashaba le midlalo yomibili kufanelwe inqotshwe noma yikanjani.
“Akulula nokho khona. Sonke siyazi ukuthi iCameroon ayilona ubala futhi bathathwa njengezinye zezikhondlakhondla zebhola e-Africa.
Mina ngithi alikho izwe mhlambe esingathi lilula uma sekukhakhaselwa ukuya kwi-Afcon, okwethu nje ukuthi siwine le midlalo yomibili ukuze kucace lapho siya khona,” kusho uMashaba.
Kanti umdlali wePlatinum Stars uNdumiso Mabhena ugcine esebiziwe kokulimala kukaDino
Ndlovu. UNdlovu odlala eCyprus ufikile ekhempini yeqembu lesizwe kodwa wahoxiswa odokotela beBafana Bafana emva kokumxilonga bathola ukuthi akakulungele ukudlala.
Kanti no-Anele Ngcongca kanye no-Andile Jali abaziqeqeshanga neqembu osukwini lokuqala ngoba benezinkinga zokuthinteka nezinhlungu.